Somali politics – The official Somali Historical
S/Guuto Ismaaciil Cali Obokor wuxuu ku dhashay magaalada Burco ee gobolka Togdheer sanadkii 1937dii. Ismaaciil Cali Obokor sanadkii 1947dii ayuu tacliinta ka galay magaalada Burco , wuxuuna waxbarashadii dugsiga hoose ku dhammeystay magaalada Sheikh sanadkii 1954tii. Sanadihii 1954tii-1956dii waxbarashadii dugsiga ku dhammeystay magaalooyinka Sheikh & Camuud. Ismaaciil Cali Obokor wuxuu yaraantiisa jeclaa in uu ka mid noqdo ciidamada Soomaaliya, isaga ...
Xuseen Sheekh C/raxmaan ( Xuseen Mataaan) Alle ha u naxariisto, Xuseen Sheekh Cabdiraxmaan oo ku Magac dheeraa (Xuseen Mataan) oo ahaa wasiirkii Gashaandhiga ee Dowladii Soomaaliya 1989-1991-kii ayaa ku geeriyooday Magaalada Minneapolis ee Dalka Maraykanka. Xuseen Mataan, wuxuu ku dhashay Magaalada Awaare Sanadkii 1941-dii. Isaga oo yar ayuu u wareegay Magaalada Muqdisho, wuxuuna halkaas ka billaabay waxbarashadii Dugsia Dhexe/Sare. Markii ...
Aduunyada nin noloow maxaa aragti kuu laaban ..taariikhdu Waa Xarig Taxan Oo Is dabayaala , waxay leedahay turutu-rooyin aan la soo koobo karin .. waqti walba waayihis .. dhacdo walba xusuusteed .. taariikh walba haraageed .. dharaar waliba haynteed .. dariiq xumina hawshii .. hadal waliba hawshi. Maalin kasta oo ku soo marta waxay kaga tagtaa xusuus iyo taariikh gaar ...
Gudoomiyahii Bankiga dhexe ee Somalia Yussur A. Faarax Abraar ayaa shaaca ka qaaday inay iska casishay xilka Bankiga kadib markii ay nafta siin weysay cadaadis ay sheegtay inay kala kulantay Madaxweynaha Somalia Hassan Garguurte iyo xubno ka mid ah golihiisa wasiirada. Sababta soo dedejisay Iscasilaada gudoomiyaha Baanka dhexe ayaa la noo xaqiijiyay inay tahay lacag dawlada Somalia u taal bangiyada ...
Cabdulaahi Ciise Maxamuud Allaha u naxariistee Waxuu ka Mid Ahaa Geesiyaasha Baal Dahab ah Kaga Qoran Taariikhda Soomaaliya. ( Fadlan Walaal Akhri Taariikhda Wadanigaas Soomaaliyeed oo ka mid ahaa Ragii Xornimada Soomaaliya u soo Halgamey ) Allaha u naxariistee Halgame Cabdulaahi Ciise Maxamuud waxuu sanadkii 1922,kii ku dhashay Degmada Afgooye ee Gobolka Shabeelaha Hoose dalka Soomaaliya. Cabdulahi Ciise aabihii ...
Allaha U naxariistee Madaxweynihii Jamhuuriyadda Soomaaliya MD. C/rashiid Cali Sharmaarke wuxuu ku dhashay degmada Xaradheere ee gobolka Mudug sanadkii 1919. Wuxuu dugsiga Quraanka iyo waxbarashadiisii dhameeyay sanadkii 1936dii, wuxuu bilaabay in uu noqdo ganacsade ka dibna shaqaale ka shaqeeya howlaha Civil servant maamulkii talyaaniga ee maxmiyadda, wuxuu noloshiisa ku qaatay wixii intaas ka dambeeyay magaalada Muqdisho. Wuxuu ka mid noqday ...
Sareeya Guud Max’ed Cali Samatar wuxuu ku dhashay magaalada Yoontooy oo u dhow magaalada Kismaayo ee gobolka Jubba Hoose, sanadku markuu ahaa 1931dii, wuxuuna yaqaantiisii ku barbaaray nolol miyi & magaalada u dhaxeysay oo u badneyd magaalooyinka Yoontooy, Goobweyn, Warkoy & Kismaayo. Aabihiis Sh. Cali Samatar isaga waxa uu geeriyooday isaga oo 6 bilood jira, waa madi waxaana la dhashay ...
Alle Haunaxariistee Marxuum S/Guud Maxamed Cali Samatar oo ahaa Madaxweyne Ku Xigeenkii Hore ee Soomaaliya, xilal kala dawana ka soo qabtay dowladdii Milatariga Soomaaliya ee Gen Maxamed Siyaad Barre ayaa maanta Aas Qaran Loogu Sammeeyay, dhismaha Wasaaradda Difaaca Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Aaska Marxuumka ayaa waxaa ka qeybgalay Madaxweynaha JFS Mudane Xasan Sh Maxamuud, Guddoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Sh Cismaan Jawaari, ...
taariikhda S/guud Maxamed Cali Samatar
Allaha u naxariistee S/Guud Maxamed Cali Samatar wuxuu ka mid ahaa saraakiishii ciidamada Soomaaliyeed ee ugu horeeyay ee debeda wax barasho u aadda, markay soo noqdeena iyagu dhisay ciidamadii qaranka, 21 Octoobar sanadkii 1969 wuxuu ka mid ahaa saraakiishii afgembiday dowladii ra’yidka ahayd. S/guud Maxamed Cali Samatar wuxuuna ka mid noqday golihii sare ee kacaanka raggii ugu muhiimsanaa, waa kuwii ...